Waxaan horey u soo maray fayrusyada laga cabsado Ebola iyo hargabka shimbiraha, laakiin waxa ay si kastaba ha ahaatee la xadidan marka loo eego this. virus Corona ayaa sabab qaar ka soo baxday in aad u daran iyo cabsi jidka ku gogleen ah ma aannu arki jirin ka hor.
soo laabashada Rabbiga
Waxaan qabaa inaan ku noolnahay waqti ah meesha aynu ka filan karto soo celinta Rabbiga. Waxaan qabaa inaan ku noolnahay waqti marka Ciise ayaa indhaha jeestay uu doortay oo jeclaaday. Waxaan qabaa inaan ku noolnahay waqti marka khatarta, baahida loo qabo iyo fahamka gudcur ah in waxa ka soo baxay dhulka oo, weligii sii muuqda. Calaamadda wakhtiyada, waan ogaan doonaa oo waa la ogyahay wakhtigii Rabbiga socda. Maxay aad dareento marka aad eegto dhamaan aduunka oo dhan, waxa ku dhihi characters, kuwaas oo aan dib ka qaadista karaa sida shil wax ama random? Waana Maqli oon Arkaa rayrayn aad u la mid ah ku qoran, iyo guriga ku soo laabtay guriga jannada. Kaalay ugu dhakhsaha badan, Rabbiga jecel yahay!
Angel Moronia € ™ s afuufaa Falls Salt Lake Dhulgariirka | LDS Living